ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » လိင်မည်မျှအရေးကြီး?
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: မေ. 23 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
မာရိနှင့်ရိုင်ယန် *(အမည်များကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ကြ) မိမိတို့၏မိတ်ဆွေများအများဆုံးငြူစူတဲ့စုံတွဲသည်ခဲ့ကြသည်. သူတို့သည်များစွာသောအလုပ်အကိုင်များနှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံးကောလိပ်ကျောင်းဘွဲ့ရခဲ့ကြ. မရှိသေးပါကလေးများ. သို့သော်လည်းအဓိကမြို့ပြဧရိယာထဲမှာရေအားဖြင့်အလွန်ကြီးစွာသောကွန်ဒို. သူတို့ကငွေရေးကြေးရေးအဆင်ပြေနှင့်မေတ္တာရှိကြ၏. လူတိုင်းသည်သူတို့ကိုသင်တို့ထံသို့လာကြနိုင်ပါတယ်ကဲ့သို့အနီးကပ်ခဲ့ကြသည်ထင် “ပြီးပြည့်စုံသောစုံတွဲသည်”.
မာရိနှင့်ရိုင်ယန်၏သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်အချို့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ကြောင်းလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုရှိခဲ့အဘယ်အရာကိုစုံတွဲ၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများမသိခဲ့ပါ4နှစ်ပေါင်း. သူတို့ဟာလိင်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ.
ရိုင်ယန်ရဲ့ဇာတ်လမ်း…”ကျွန်မလုံးဝမာရိနှင့်တကွချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ရှိပါ၏. သူ့ကိုငါကလိင်များအတွက်အသည်းအသန်သို့မဟုတ်ဆူဖြိုးမခံစားရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သို့သော်လည်းငါသည်သေးမိန်းမအကြောင်းကြပြီမဟုတ်အဘယ်ကြောင့်သာအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်. ငါသည်လည်းသူ့အားဆွဲဆောင်ပါ၏, သို့ရာတွင်ငါယူသို့မဟုတ်သူမ၏လိင်ဆက်ဆံထွက်ခွာနိုင်. ကိုယ့်သော်လည်းသဘောတူညီချက်၎င်း၏ကြောင်းကြီးတွေသည်ဟုမထင်ကြဘူး. ကျွန်တော်”ဖြစ်နိုင်မကြာမီအဆိုပြုပါမယ်။”
မာရိရဲ့ဇာတ်လမ်း…”ကျနော်တို့ခန့်လိင်ရှိသည်4ဆဟာတစ်နှစ်ကို. ငါမည်သူမဆိုပြောပြဘယ်တော့မှ. ကိုယ်ဟာသူ့ရဲ့ပုံမှန်မဟုတ်သိ. ကျနော်ရိုင်ယန်ဤမျှလောက်များစွာသောအခြားနည်းလမ်းများသည်ကြီးလှပေဆိုလို – ငါသည်အရခြင်းဟာအလွန်ကိုကကျွန်တော်တို့ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေလိမ့်မည်ဟုမထင်မိပါဘူး. သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကိုယ့်အံ့သြစရာပြုပါ – ငါ့ကိုဖြစ်ပါသည်? ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုဖြစ်ပါသည်?”
ယုံကြည်သို့မဟုတ်မ – ပုံမှန်သို့မဟုတ်နှစ်ဖက်စလုံးမှကျေနပ်လိင်ဆက်ဆံကြသည်မဟုတ်သောသူ့ရိုင်ယန်မာရိနှင့်မာတူအများအပြားစုံတွဲများရှိနေပါသည်. သူတို့လိင်သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုသတ်မှတ်သင့်ပါသည်သည်ဟုမထင်ကြဘူးသောကြောင့်, သူတို့ထဲကအများစုကအဲဒီအကြောင်းဘာမှမလုပ်နေမတရားမျှတ. လူအများစုကမကောင်းတဲ့ဓာတုဗေဒသို့မဟုတ်မကောင်းတဲ့ဆက်သွယ်ရေးအပေါ်အခြေခံတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအဆုံးသတ်ရန်ပြင်ဆင်ထားကြသည်မဟုတ်. သင်အလိုတခုတည်း?
ဒီပုံပြင်သင်၏အသက်တာနှင့်တူအသံမယ်ဆိုရင် — စဉ်းစားရန်လိုအပ်အရာအချို့ရှိပါတယ်…
2. လိင်ကိုသင်မည်မျှအရေးကြီး? ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲမည်မျှအရေးပါခဲ့?
ကျွန်တော့်ထင်မြင်ချက်အရ, လိင်တာရှည်၏တစ်ဦးအရမ်းအရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တယ်- အခေါ်အဝေါ်ကြားဆက်ဆံရေး. အဲဒါမပါပဲ – လူအခြားဆက်ဆံရေးကိုနှင့်အတူဖြည့်စွက်မည်ကိုဟင်းလင်းလည်းမရှိ, အစာ, လောင်းကစားဝိုင်း, အရက်သို့မဟုတ်အခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုမူသောအမှု (အင်တာနက် porn သို့မဟုတ်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ), စသည်တို့ကို.
နောက်ထပ် – လိင်တစ်ဦး၏ပျော်စရာတွေအများကြီးနဲ့နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ပျော်စရာဖြစ်! သင့်ဆက်ဆံရေးကိုတကယ့်ဆုလာဘ်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်နိုင်သလဲဆိုတာပေါ်ထွက်လက်လွတ်မထားပါနဲ့. သင်နဲ့သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်သင်၏လိင်အသက်တာအကြောင်းကိုမဆက်သွယ်နိုင်လျှင် – သို့ဖြစ်. သင်တို့သည်အထွေထွေဆက်သွယ်ရေးပျက်ပြားကာလရှိသည်. နောက်ဆုံးမှာသင့်အသက်တာ၏အခြားနယ်မြေဒေသများသို့ seep လိမ့်မယ်. ယခုသို့မဟုတ်သင်သည်လည်းအကြီးအကျယ်သေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ့်လျှင်သင်လိုအပ်တဲ့အကူအညီရယူပါ – သင်တတ်နိုင်သမျှစဉ်ထုတ်ကယ်တင်ရန်ချင်တဲ့အကြောင်း,.
ကောက်ချက်…ရိုင်ယန်မာရိနှင့်မာနောက်ဆုံးမှာလက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းနှင့်ပျားရည်ဆမ်းခရီးဖက်ကလိင်ဆက်ဆံခဲ့. ဒါကတစ်ဦးပျားရည်ဆမ်းခရီးစိတ်ကူးယဉ်မာရိ၏အယူအဆ fit ဘဲ, ဒါကြောင့်သူမအနေနဲ့ရာဇသံအရမ်းထိတ်လန့နှင့်ရိုင်ယန်ကိုပေး၏. ကုထုံးသို့မဟုတ်ပယ်ဖျက်ရန်. သူတို့ကကုထုံးတစ်ခုစမ်းကြည့်ပေး ပြု. ဒါပေမယ့်ရိုင်ယန်အပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့အများကြီးမရှိသည်ကိုတွေ့ရှိ. သူကပဲမာရိနှင့်တကွလိင်သို့မဟုတ် sex အကြောင်းလုံလောက်အသည်းအသန်မဟုတ်ခဲ့. သူကသေချာမဟုတ်ခဲ့. ကံမကောင်းစွာပဲရိုင်ယန်မာရိနှင့်မာကွဲကွာခဲ့ပြီးယခုကွာရှင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဆွေးနွေးကြတယ်.